विचार/दृष्टिकोण - Ratopati
संविधान कार्यान्वयन नै जनताको चाहना
राजनीतिको घोडेजात्रा बाहेकका प्रायः सबैजसो खेल रुचिकर लाग्न छोड्यो– मुलुकमा, जनतामा अनि सिङ्गो देशमा । हिजो सशस्त्र द्वन्द्वको त्रासदी परिवेशमा नेपाल आमाका सहोदर भाइका हत्याको खबर रुचिकर थियो । संविधान निर्माणको लामो प्रतिक्षामा कुरेर केस पाक्न लाग्दा अलिकति मुस्काउने आशामा बसेकी हजुरामाको मुजा परेको गालाले खै मुस्कुराउलाझैं लाग..
किरात गणराज्यवारे यस्तो छ गोपाल किरातीको विश्लेषण
गोपाल किराती, अध्यक्ष, अखिल किरात लेखक सङ्घ किराती जनता किरात राज्य लिन सक्षम छन् ? महान् ..
कमरेड सुरेन्द्र पाण्डेको बेसुरा गीत
अहिले संविधान सशोधनका नाममा देश र मधेस विखण्डन, विभाजनको सङ्गीन घडी छ । नानाथरी लेन्डुपहरु..
‘अहँ, भारत जाँदिन, निर्वासनमा जाँदिन, भागेर जाँदिन, जे गर्छु नेपालकै माटोमा गर्छु’ यसो भन्..
व्यवस्थापिका संसदमा रुपान्तरित भएको तत्कालीन दोस्रो संविधानसभाको चुनावबाट देशकै दोस्रो ठूल..
कमरेड प्रचण्ड ! ओलीलाई सच्याउने कि पछ्याउने ?
दोस्रो पटक देशको प्रधानमन्त्रीमा निर्वाचित भएपछि माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई भारतद्वारा संरक्षित नेताका रूपमा प्रचार गरिएको छ ।
एमालेमा ‘ओथेलो सिन्ड्रोम’ अर्थात इश्र्या रोग
श्र्या एक मानविय संबेदना हो, उर्जा हो । इश्र्या भावलाई सकारात्मक दिशा दिन सकियो भने मानिसले धेरै पुरुषार्थ गर्नसक्छ । उसले इश्र्याको उर्जालाई सफलताको सिंढी बनाउनसक्छ, यदि त्यो नकारात्मक कोणतीर गयो भने त्यसले विध्वंश मच्चाउँछ ।
कुल जनसङ्ख्याको आधा हिस्सा रहेका महिलाले पुरुष समान अधिकारका लागि निरन्तर आवाजहरु उठाइरहेका छन् । शिक्षा, स्वास्थय, रोजगारी लगायत राज्यका नीति निर्माण तहमा समेत समान प्रतिनिधित्व हुनुपर्छ भनेर लडिरहेका छन् ।
दुर्दिन ल्याउने दुर्दान्त नायक !
प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले राजनीतिक फड्को मार्न दुईटा खतरनाक अस्त्र चलाए । एउटा हो बन्दुक, अर्काे हो साम्प्रदायिकता । उनले जनयुद्धको नाममा ठाउा कुठाउँ बन्दुक चलाए । युद्धसंग सरोकार नै नभएका हजारौं मानिस मारिए । बन्दुक बन्द भइसकेको छ तर बारुदको धुँवा अहिले पनि मडारिइरहेको छ, बारुदको दुर्गन्ध देशभरी फैलिएको छ । उनले चल..
खाद्य अधिकार कार्यान्वयनमा उठेका केही सवालहरु
नेपालमा यतिबेला संविधान कार्यान्वयनको सवालमा व्यापक वहसहरु भइरहेका छन् । आउने एक वर्षभित्र हामीले अङ्गीकार गरेका तीनवटै तहको निर्वाचन सम्पन्न गर्नुपर्ने बाध्यताका बीचमा राजनीतिक रुपमा ध्रुवीकरण प्रारम्भ भएको छ । संविधान संशोधनको प्रस्तावविरुद्धको आन्दोलन देशव्यापी भएको छ । यस्तो अवस्थामा नेपालको संविधान २०७२ ले प्रत्याभूत गरेको ..
मधेशी र थारुहरू देशभक्त, मधेशवादी भारतीय विस्तारवादको पक्षपाती
कुनै पनि देशको संविधानमा संशोधन एउटा सामान्य संवैधानिक प्रक्रिया हो । संसारका सबै राष्ट्रहरूमा संविधानमा संशोधनको विधि हुन्छ, यो विधि अनुसार संविधानमा बारम्बार संशोधन हुने गर्दछ । तर अहिले नेपालको संविधानमा संशोधन एउटा गम्भीर, जटिल र विकराल प्रश्न बनेको छ । त्यो कारणले हाम्रो देशको राष्ट्रियतामा नै गम्भीर खतरा उत्पन्न भएको छ । त..
किन लाग्छन् दिल्लीको दलालीमा हाम्रा नेताहरू ?
ब्रिटिश साम्राज्यको उपनिवेशकालीन समयमा विश्व उपनिवेशको शिकार भइरहेका बेला समेत आफूलाई स्वतन्त्र राख्न सफल भएको हाम्रो देश नेपाल उपनिवेशकालीन समयको अन्त्य भएपछि भने दलाली र उपनिवेशवादी सोचको शिकार बन्न पुगेको छ । नेतृत्वमा आउने हरेक शासकमा रहेको दलाली सोचका कारण समग्र मुलुक नै यसको शिकार बन्दै आइरहेको छ । वि.सं.२००७ भन्दा ..
शिक्षा ऐन, आठौँ संशोधन कार्यान्वयनका चुनौती
“सामुदायिक विद्यालयका शिक्षक तथा कर्मचारीहरुले आफैले काम गर्ने विद्यालयलाई विश्वास नगरी आफ्ना बालबालिका निजीमा भर्ना गर्नाले सामुदायिक विद्यालयको गुणस्तर खस्किएको हो” भन्ने गुनासो आम अभिभावकहरुबाट आइरहेको छ । यस परिपेक्षमा शिक्षामन्त्री धनीराम पौडेलद्वारा यही असोज २० गते सार्वजनिक शिक्षासम्बन्धी १९ बुँदासहितको ६ महिने कार्ययोजना..
डियर सुप्रिमो ! होलेरीलाई रुवाएर हिन्दुस्तान हसाउनै पर्ने ?
सरकारले मधेस समस्या समाधानको नाममा प्रदेश ५ का पहाडी जिल्लालाई टुक्र्याएर प्रदेश ४ मा राखेपछि अहिले प्रदेश ५ का पहाडी लगायत तराईका जिल्लामा समेत आन्दोलन चर्किरहेको छ । संविधान जारी भएलगत्तै भारतीय आडमा देशलाई नाकाबन्दीको कठोर सजाय भोग्न बाध्य पारेका मधेसवादी दलहरुले उठाएका माग सम्बोधनको निम्ति भन्दै पाहाडका रोल्पा, रुकुम, प्युठा..
कांग्रेस एकातिर, एमाले अर्कातिर, चाबी कतातिर ?
नेपाली राजनीतिमा अहिले ठूलो ताला लागेको छ । चाबी कोसंग छ थाहा छैन । संविधान संशोधन ताला लागेको हालतमा छ । अख्तियार प्रमुख लोकमान सिंह कार्कीलाई लगाइएको महाभियोगको ताला खुलेको छैन । स्थानीय चुनावमा ताला लागेको बीस वर्ष भयो, ताला खुल्ने छाँट छैन । संविधान कार्यान्वयन अहिले पनि भइरहेको छ तर यसको भविष्य धरापमा छ […]
खाँचो छ मृत्यु संस्कारमा परिमार्जनको
पारिवारको कुनै सदस्यको मृत्यु भएपछि परिवारजनले काजकिरिया गर्ने संस्कार प्रायः सबै मानव समुदायमा छ । हम्रो हिन्दू समुदायमा पनि मृत्यु संस्कार गर्ने कार्य परापूर्वकालबाट नै हुँदै आएको छ । तर पहिलेको तुलनामा अहिले धेरै नै सरल र सहज हुँदै आएको छ । सामान्य अर्थमा मृत्यु संस्कार भनेको मृतकप्रति श्रद्धापूर्वक गरिने सम्झना एवं मृतकको आध..
एमालेद्वारा ‘पाँच नम्बर’ बहानामा सत्ताको मोलमोलाई !
एउटा हिन्दी गीत बडो हिट छ । जसको एक पङ्क्ति यस्तो छ : ‘उस ने किया तो रासलिला हम ने किया तो क्यारेक्टर ढिला ?’ अर्थात् त्यही कुरा अरुले गर्दा रासलिला (कृष्ण लिला) का रुपमा उच्च सम्मान पाउने तर आफूले गर्दा चाहिँ क्यारेक्टर ढिला अर्थात चरित्रहीन भनेर आरोप लगाइने विरोधाभाषी प्रवृत्तिप्रति यो गीतमा कटाक्ष गरिएको […]
ओलीको समाजशास्त्र : नेपालवाद !
ने.क.पा. एमालेका अध्यक्ष तथा पूर्व प्रधानमन्त्री के.पी. शर्मा ओलीको समाजशास्त्र नेपालवाद हो । माक्र्सवाद र जबजका प्रकाशमा ओली नेपाल राष्ट्रको सर्वोपरि हितलाई केन्द्रविन्दुमा राख्छन् । ओली नेपाल अविकसित हुनुपर्ने देश नै होइन भन्छन् । उनीे नेपाली वीर सन्ततिले रोजगारका लागि रगत र पसिना बगाएर विदेशलाई समृद्ध पारेको स्थितिमा नेपालीले..
प्रदेश नं. ४ को नवलपुर क्षेत्रलाई यसरी गरौं पुनर्संरचना
नेपालको संविधान २०७२ को धारा ५६ (१) ले सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तह गरी ३ तहको राज्यको मूल संरचना रहने व्यवस्था गरी सोही धाराको उपधारा (४) र (५)ले स्थानीय तहतर्फ गाउँपालिका, नगरपालिका र जिल्लासभा रहने तथा सामाजिक सांस्कृतिक संरक्षण वा आर्थिक विकासका लागि विशेष, संरक्षित वा स्वायत्त क्षेत्र कायम गर्न सकिने व्यवस्था गरेको छ । [&helli..
एमालेमा हुर्किएको गाली संस्कृति
माघ १ मा राजा ज्ञानेन्द्रले सबैलाई घोक्रेठ्याक लाएर खेदेपछि एमालेको गाली र विरोधको केन्द्रमा राजा ज्ञानेन्द्र र युवराज पारस देखापरे । साथै त्यति बेलाका राजाका सहयोगी समर्थक पनि एमालेका नेता कार्याकर्ताहरुको अभिव्यक्तिमा गालीको विषयवस्तु बन्थे । २०६३ वैशाखमा संसद पुनस्र्थापना भएर राजाको अधिकार कटौती भएपछि निकै समयसम्म पनि एमालेको..
भीडबाट उछिट्टिएर नेतृत्व लिन खोज्ने ?
अन्ततः संविधान जारी गर्दा जे आशंका गरिएको थियो, त्यही भयो । अर्थात् मुलुकको नयाँ संविधान समस्या समाधानको विकल्प होइन कि थप समस्याको पोको बन्न पुग्यो । हो, मुलुकमा नयाँ संविधानको आवश्यकता महशुस हुनुका केही ऐतिहासिक कारणहरु छन् । अनि दसकौंको राजनीतिक संघर्षमय प्रतीक्षाको पनि निश्चित मक्सद हुन्छ नै । हाम्रो देशमा नयाँ संविधानको आवश..
प्रचण्डले पाउने सलाम केपी ओलीलाई
दशवर्षे जनयुद्धका विरोधी हुन् एमाले नेता केपी ओली । तर म समर्थक थिएँ । जनयुद्धले देशव्यापी प्रभाव विस्तार गरिरहेका बेला पनि केपी ओली जनयुद्धका विरोधी नै रहेका थिए । मैले त झन् त्यसको विरोध गर्ने कुरै भएन । केपी ओलीले महाकाली सन्धि संसद्बाट पारित गर्दा म त्यसको विरुद्धमा थिएँ । केपी ओलीले महाकाली सन्धिबाट नेपाललाई […]
वैकल्पिक राजनीतिमा यस्तो चाहिन्छ युवाको भूमिका
वैकल्पिक राजनीतिक शक्ति र यसको आवश्यकताका बारेमा बारम्वार चर्चा हुने गरेको छ । यतिबेला यो विषयको चर्चा नेपालमा मात्र होइन, विकसित मुलुकहरुमा पनि भइरहेका छन । वैकल्पिक पार्टी वा शक्ति निर्माण विशेषतः युवा पुस्ताको अगुवाईमा हुने गरेका छन् । जुन समाजमा युवा वर्गले परिवर्तनको नेतृत्व गरेका छन्, ती समाज उन्नत र विकसित भएका छन् । [&he..
सम्पदा पुनर्निर्माणमा नगरौँ ढिलाइ
हाम्रा पितापुर्खा साच्चै माहान थिए । उनीहरुले भूकम्पका विभिन्न चरणका कम्पन, पराकम्पन तथा प्राकृतिक विपत्तिहरु विभिन्न धार्मिक तथा सांष्कृतिक सम्पदाहरुको निर्माण गरे । त्यसको संरक्षण र संवद्र्धनका लागि कयौँ अफ्ठ्याराहरु छिचोलेर हाम्रा लागि र हाम्रा भावि पुस्ताका लागि सुरक्षित गरे । उनीहरुले जस्तोसुकै गरिबी र कठिनाइ झेले पनि सम्पद..
खड्गो नै खड्गोबीच प्रधानमन्त्री प्रचण्ड
प्रधानमन्त्री प्रचण्डको पद अझै पनि धरापमा छ, धरापबाट उनी जोगिएका छैनन् । संविधान संशोधन विधेयक पारित नहुने अवस्था प्रष्टैसंग देखियो । पारित नभए पनि राजीनामा नमाग्ने, गठवन्धन नतोड्ने भनेका छन् कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा र मधेसी मोर्चाका नेताहरुले । कांग्रेस र मधेसी मोर्चाले समर्थन नदिए प्रचण्ड टिकिरहन सक्दैनन्, तैपनि उनको पद..